पत्रकार रबि लामिछानेद्वारा न्युज २४ छोडेको औपचारिक घोषणा – Sandesh Press
January 20, 2021 224
काठमाडौं, बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको घोषणा गरेका छन् ।प्राप्त जानकारी अनुसार भोलि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता संगको एक भागमा मात्र रबि देखिने छन् ।भोलि प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै न्युज २४ टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिन लागेको उनले बताएका छन ।
काठमाडौं। भारतको पश्चिम बंगालको ज’ल्पाइगुडीमा कु’हिरोका कारण ग’म्भीर दु’र्घटना भएको छ । धु’पगुडी क्षेत्रमा मंगलबार राती ९ बजे लो’ड भरिएको ट्रक कैयौं गाडीहरुसँग ठो’क्किँदा १३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । १८ जना घा’इते भएको बताइएको छ । घा’इतेहरुलाई ज’ल्पाइगुडी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।ज’ल्पाइगुडीका एएसपी डा. सुमन्त रोयका अनुसार मंगलबार राती ९ बजेर ५ कि’नेटको समयमा लो’ड भरिएको ट्रक मा’यानालीमा गइरहेको थियो । अर्कोतर्फबाट टाटा म्याजिक र मारुती भ्यान ग’लत दिशामा आइरहेका थिए ।
कु’हिरोले नदेखेपछि ट्रक र टाटा म्याजिक ठोक्किए । त्यसपछि ट्रकले मारुती भ्यानलाई पनि ठ’क्कर दियो । यस क्रममा ट्रकमा लो’ड गरिएको सामान कैयौं गाडीमाथि ख’स्यो । यो दु’र्घटनामा १३ जनाको मृ’त्यु भयो, १८ जना घा’इते भए । प्र’त्यक्षदर्शीका अनुसार दु’र्घटना भएको ट्रकले अर्को ट्रकलाई ओ’भरटेक गर्न लागेको थियो । यही क्रममा वि’परित दिशाबाट आएका डा’गीसँग ठो’क्कियो । ट्रक चालकलाई हि’रा’स’त’मा लिइएको बताइएको छ।
भारतको पश्चिम बंगालको ज’ल्पाइगुडीमा कु’हिरोका कारण ग’म्भीर दु’र्घटना भएको छ । धु’पगुडी क्षेत्रमा मंगलबार राती ९ बजे लो’ड भरिएको ट्रक कैयौं गाडीहरुसँग ठो’क्किँदा १३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । १८ जना घा’इते भएको बताइएको छ । घा’इतेहरुलाई ज’ल्पाइगुडी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।ज’ल्पाइगुडीका एएसपी डा. सुमन्त रोयका अनुसार मंगलबार राती ९ बजेर ५ कि’नेटको समयमा लो’ड भरिएको ट्रक मा’यानालीमा गइरहेको थियो । अर्कोतर्फबाट टाटा म्याजिक र मारुती भ्यान ग’लत दिशामा आइरहेका थिए ।
Prevढल्यो एउटा बलियो खम्बा : आर्यघाटमा कलाकारहरुको चल्यो रुवाबासी
Nextकुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत प्राधिकरण दोहोर्‍याउने सरकारको तयारी ! आउनु पर्छ भन्नेले सेयर गरौं
हतार हतारमा यसकारण छवीसँग डिर्भोस गरेकी शिल्पा यि भारतीय विबाहित निर्देशकसँग प्रेममा रहिछन्